I-ColorWare ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ii-AirPods 3 kwaye zinobunewunewu | Ndisuka kuMac
I-ColorWare ikuvumela ukuba wenze i-AirPods 3 ibe yeyakho kwaye zitofotofo
Le yenye yeenkampani ezibonelela ngenketho enomdla kunye necocekileyo yokwenza izinto zethu esizithandayo. I-ColorWare ibisenza le misebenzi yokwenza ngokwezifiso iminyaka emininzi kwaye bayakwazi ukwenza yonke into ngayo nayiphi na i-headset, i-console control, i-consoles ngokunjalo, ii-microphone, njl.
Ngokuqinisekileyo uninzi lwenu sele luyayazi le webhusayithi ibonelela ngenketho yokongeza ukulungelelaniswa okumangalisayo kwizixhobo zethu kunye nokuzenza ngokwezifiso ngeempawu okanye ngokokuthanda kwethu. Iyonke sifumana phezulu Imibala emi-64 eyahlukeneyo, ukuze sibe nesizukulwana sethu sesithathu see-AirPods kumbala esiwufunayo kwaye sigqame ngokuchasene nabamhlophe. I-ColorWare ayenzi ngokwezifiso ii-earbuds kuphela, kodwa ibhokisi yokutshaja yee-earbuds ngokunjalo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba ixabiso eliboniswe kwiwebhu kukuba Ii-headphones kufuneka zithengwe ngokuthe ngqo kwiColorWare kwaye sele beze nombala wesiko. Vula iwebhusayithi yenkampani yeColorWare Unokwenza imidibaniso yakho kwaye inyaniso kukuba bayasimangalisa ngobuninzi bemibala abasinika yona, ukusuka kwi-matte ukuya kwimibala eqaqambileyo.
Ngokwenyani imidibaniso yemibala kwezi sizukulwana sesithathu see-AirPods yinto yobuqu. Umbala okhazimlayo okanye omatte omnyama unokuba ngumbala owuthandayo, kodwa oku kuvula umnyango wokwenza ngokwezifiso ngakumbi kubo bonke abo bafuna ukunxiba imibala engakhathaliyo kwii-headphones zabo, baze badibanise ngeendlela ezahlukeneyo, enye ebomvu, enye emnyama kunye nebhokisi yokutshaja komnye umbala ... Ukongeza. Ukuya kwiziphene ezibonelelwe ngeColorWare zingaphezulu kokuthelekiswa ngabasebenzisi ngoko awuyi kuba neengxaki zalo naluphi na uhlobo ngale nkampani yokwenza ngokwezifiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-ColorWare ikuvumela ukuba wenze i-AirPods 3 ibe yeyakho kwaye zitofotofo
Uwusebenzisa njani umsebenzi wokujonga iSplit kwiMacOS Monterey
Ngoku unokubona isishwankathelo sexesha lokuqala le "Foundation" (Spoiler)